Siswoo i8 Phanter, nanandrana ny telefaona vaovao Siswoo | Androidsis
Efa nasehonay anao ny tsiambaratelo rehetra an'ny Siswoo R9 Darkmoon, fitaovana iray miavaka amin'ny efijery roa sosona. Ny fahagagana lehibe iray hafa nentin'ny mpanamboatra aziatika dia ny Siswoo i8 Panther, telefaona misy famaranana lehibe, endrika tsara ary vidiny mamaky tany.
Andao hizaha ireo rehetra i8 Panther toetra ara-teknika, telefaona iray izay ho lasa iray amin'ireo loha roa lohan'i Siswoo izay kendreny hahazo toerana eo amin'ny tsenan'i Espaniola. Ho azonao ve izany?
1 Siswoo i8 Panther, telefaona tsara tarehy misy famaranana premium
2 Toetra ara-teknika an'ny Siswoo i8 Panther
Siswoo i8 Panther, telefaona tsara tarehy misy famaranana premium
Ny iray amin'ireo zavatra nanaitra anay indrindra momba ny Siswoo i8 Panther dia ny kalitaon'ny famaranana. Ny vatan'ny aliminioma dia mamoaka kalitao, mahafinaritra tokoa ny mikasika ary azonao jerena amin'ny fotoana voalohany ny kalitao nananganana an'ity telefaona ity.
Na dia marina aza fa tsy fantatsika ny lanjany, ny antsipiriany iray hafa izay nanaitra anay dia ny halavany. Ny Siswoo i8 Panther dia telefaona ahazoana aina sy mora ampiasaina, azo antoka fa mpifaninana amin'ny iPhone 6s sy Sony Xperia Z5 Compact. Na dia manana tombony lehibe aza ny telefaona vaovao avy any Siswoo: ny vidiny.
Toetra ara-teknika an'ny Siswoo i8 Panther
efijery 4.7 santimetatra miaraka amina 720p vahaolana
S manantena ny Siswoo i8 Panther dia mahatratra ny tsena mandritra ny volana oktobra amin'ny vidiny tena mahaliana: 199 euro. Tsarovy fa i Siswoo dia manome antoka fa ny baiko vita avy any Espana dia ho tonga ao anatin'ny 48 ora farany, ka io finday mahaliana io dia tsy maintsy jerena.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » IFA » Siswoo i8 Phanter, nanandrana ny telefaona vaovao Siswoo izahay